Kungani I E-skateboard Ngakho Sizzling Futhi Wamukelwa ngu Wena. - Jomo Technology Co., Ltd
Kungani I E-skateboard Ngakho Sizzling Futhi Wamukelwa ngu Wena.
Lokho kuyiqiniso ngokuphelele, lapho ethi siphelela esiyingqayizivele, kukhona uhlobo olufanayo ngakho eyaziwa ngokuthi iOS e emakethe kakade. Lezi ngesandla khulula Scooters kagesinoma skateboard kagesi kungenziwa ngayiswa izindawo million, akunandaba ukuthi yini le mibhobho. Koowheel inguqulo entsha Electric skateboard Kooboard: Lokho lena kuyindlela enhle yokuthi intsha ukuba ujabule nokuhamba.START_BREAKSTART_BREAKUmsebenzi ngesikhathi esifanayo. Sithatha kujabulise we skateboard, ukwenza kube lula ukwenza ukusetshenziswa njengoba isithuthuthu, ngemva kwalokho lona i kancane xaxa kancane swag. Electric Skateboard is ezazigxishwe kumnandi futhi iba umdlalo kwezizwe eziningi ezincane. Kuvele skateboard kagesi lwenzelwe futhi uvela Koowheel sha e-China.
Ngenxa, bathi, ukuthi skateboard wayengeyena nje ithuluzi travel kodwa futhi ngcono izinga lokuphila umuntu ngandlela-thile. Kungaba ungeze eguquguqukayo kanye uhambo bushelelezi. Uma afuna imodi yangasese yezokuthutha ukuthi kungathatha wena kusuka endaweni eyodwa kuya kwenye, ngokushesha, kumelwe ukhethe i-nezimfashini umthengi. Ingxenye ebalulekile yokuphikelela abangenalwazi zokuthutha wokwehlayo wukuthi amaloli uthole kuqala phezu izimoto womuntu ayindlala lomgwaqo isici yokupaka. Abantu okwandile bebelokhu, ngokokuqala primary, umkhankaso emhlabeni yokuhamba self-kulinganisa.
Koowheel skateboard zakhelwe mnene futhi enamandla lapho bakunike uhambo abushelelezi laphaya. Phakathi nocwaningo yethu sabona ukuthi izizwe eziningi Asian wayevele bakamalalahlengezela aphakeme electro-ukuhamba futhi ngandlela-thile, kulo lonke uhambo ibhizinisi, sasiye kuye kwadingeka Scooters kagesi, hambisa amabhodi - skateboard! Lezi amabhethri ayekade sisebenzisa voltage elingalungile noma amaseli enesici amabhodi amaningana lokuhambisa phezulu umlilo wabanjwa kuyilapho kokuwushaja noma ugibele. Kodwa lokho akuyona yonke isici eyinqaba ngazo-ukuthi kungaba yokuthi ezishisayo iholide umvuzo walo nyaka azigcina ekubambeni ngomlilo. Into yokuqala kakhulu uqaphela noma kunini uma ukubheka entsha wezimpahla isikuta empeleni kuyinto engekho, noma igebe, ngokuhamba umshini. I Koowheel kuyinto Chinese wenza self ngokulingene isikuta lokho eselungela ukudweba izinhlobo eziningi hoverboard ngenxa nomklamo walo imfashini.
isikhathi Iposi: Oct-19-2017